Maxay Tahay Sababta Dalbasho Jumlad Innaga Ah? - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
U dir baaritaan, iibkeenu isla markiiba wuu kula soo xiriiri doonaa wuxuuna ku siin doonaa bukaan socod iyo adeeg saaxiibtinimo. Waxaan aqbalnaa ikhtiyaarka bixinta lacag bixinta ee PayPal. Waxaan sidoo kale aqbalnaa bixinta Bangiga iyo bixinta Western Union. Bilaw maanta!
Waxaan u adeegsannaa DHL, FEDEX, UPS iyo EMS si aan u rarno xirmooyinkayaga yaryar. Laga soo bilaabo bakhaarka MOLONG TATTOO SUPPLY ilaa meelaha waaweyn ee Waqooyiga Ameerika, Yurub, Aasiya iyo Ustaraaliya, dhoofintu waxay qaadataa 3 ilaa 7 maalmood oo shaqo. Hawada iyo Badda ayaa waliba la heli karaa!
Amniga ayaa ah mudnaanta koowaad ee SUPPLY MOLONG TATTOO. Waxaan hubineynaa amniga dhammaan macluumaadka macaamil ganacsi. Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan alaabtaada u gaarsiino si ammaan ah waqtiga. Waxaan ka dhigaynaa macluumaadkaaga iibsiga si qarsoodi ah. Si ammaan ah naga dalbo!